Khabiirka Cilmi-baarista wuxuu sharraxayaa sida loo soo saaro xogta laga helo Website-ka
Webka xoqitaanka, oo loo yaqaan 'extraction data data', waa farsamo loo isticmaalo wargelinta macluumaadka internetka. Qalabka shabakada websaydhku waxay u galaan shabakadaha internetka ee isticmaalaya Qodobka Xawilaadaha Qodobka Sharciga ah waxayna ka dhigaan mid sahlan in aan naga saarno xogta laga helayo bogagga internetka. Haddii aad rabto inaad ururiso oo aad xoqdo macluumaadka bogagga internetka, waxaad isku dayi kartaa shabakad soo socota nambarka barnaamijka.
Waa mid ka mid ah qalabka wax soo saarka ugu fiican. 80 lugood ayaa caan ku ah interface-user-saaxiibtinimo. Waxay tirineysaa xogta iyo qaab dhismeedka sida waafaqsan shuruudahaaga. Waxay qaadataa macluumaadka loo baahan yahay sanadaha gudaheeda waxayna sameyn kartaa hawlo kala duwan isla waqti isku mid ah. 80 lugood waa doorashadii hore ee PayPal, MailChimp, iyo Facebook.
Iyada oo Spinn3r, waxaan ku soo qaadan karnaa xogta oo waxaan ku dhejin karnaa bogga oo dhan. Qalabkani wuxuu ka soo saari doonaa xogta laga helo bogagga warbaahinta bulshada, wargeysyada, RSS iyo ATOM quudinta iyo blogyada gaarka loo leeyahay. Waxaad ku kaydin kartaa xogta JSON ama CSV hababka. Spinn3r waxay xajisaa xogta in ka badan 110 luuqadood waxaana ka saaraa spam faylashaada. Console's admin wuxuu noo ogolaanayaa inaan xakameyno dhererka halka goobta oo dhan la xoqay.
4. Soo dejinta. Io
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee ugu faa'iidada yar xogta ee software. Soo dejinta. Io waa caan ku ah tiknoolajiyadeedii ugu dambaysay waxayna ku haboon tahay barnaamijka iyo kuwa aan barnaamijka ahayn. Waxay xajisaa xogta laga helo bogag badan oo websaydh ah waxayna u dhoofisaa qaababka CSV iyo qaababka JSON. Waxaad xoqin kartaa in ka badan 20,000 oo bog bog ah saacad, iyo soo dejinta. io wuxuu bixiyaa barnaamij bilaash ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Windows, Linux iyo Mac.
Haddii aad raadineyso inaad soo saarto bogga oo dhan, waa inaad isku daydaa Dexi. io. Waa mid ka mid ah qodobbada ugu fiican iyo kuwa ugu faa'iidada badan ee wax lagu qoro iyo kuwa gurguurtey. Dexi. io waxaa kale oo loo yaqaan 'Cloud Scrape' waxaana laga qaban karaa boqolaal bog oo bog ah daqiiqad kasta. Daabacaadda shabakadda ku salaysan waxay u sameysaa gorgortan waxayna soo saareysaa xogta waqtiga dhabta ah. Marka xogta la soo saaro, waxaad ku keydin kartaa sanduuqa. net ama Google Drive ama si toos ah ugu soo qaad khadkaaga adag.
Nidaamyada codsiyada ku salaysan ee browser-ka iyo qabanqaabiya xogtaada si habboon. Webhouse. io waxaa ugu fiican ee loo yaqaano xogta ay ufududeyso iyo tiknoolajiyada barashada mashiinka. Iyada oo adeeggan la adeegsanaayo, waxaad ku darsan kartaa xog aad u ballaaran oo laga helo ilo kala duwan oo hal API ah. Waxay awood u leedahay in ay tirtirto kumanaan website ah saacad gudaheed oo aan wax u dhimeyn tayada. Xogta waxaa loo dhoofin karaa XML, JSON iyo qaababka RSS.
7. Muuqaal Sawireed
Tani waa software faa'iido leh oo user-saaxiibtinimo ku habboon. Iyadoo Sawir Sawir leh, waxaad ku soo qaadan kartaa xogta waqtiga dhabta ah waxayna u dhoofi kartaa qaababka sida JSON, SQL, CSV, iyo XML. Waxaa si fiican loo yaqaan calaamadda dhibicda iyo guji-ga iyo waxay xoqin kartaa faylasha PDF iyo JPG Source .